Ederede Paswọdu Mberede | Martech Zone
Ederede Paswọdu Mberede WordPress
Fraịde, Machị 9, 2012 Douglas Karr
Kwa oge, anyị na -ezute ụlọ ọrụ nwere WordPress kwadoro na sava na -enweghị ike izipu email. Nke a na -ekwupụta mbibi mgbe ị furu efu paswọọdụ na WordPress ma ịkwesịrị ịbanye iji weghachite ya. WordPress na -echekwa okwuntughe ezoro ezo, yabụ na ịnweta ohere nchekwa data anaghị enyere aka. Mana ọ bụrụ na ị nwere ohere ịnweta sava ahụ site na FTP, ị nwere ike bulite edemede ga -enye gị ohere tọgharịa nhazi njikwa site na ibe. Nke a bụ ozi sitere na saịtị ahụ:
Chọrọ ka ị mara onye njikwa aha njirimara.
Ọ na -emelite paswọọdụ onye nchịkwa wee zipu ozi na adreesị ozi -e onye nchịkwa.
Ọ bụrụ na ịnataghị ozi -e ahụ, paswọọdụ ka agbanwere.
ị emela ọ dị mkpa ka ịbanye na ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike banye, ịgaghị achọ edemede ahụ.
Debe nke a na mgbọrọgwụ nke nwụnye WordPress gị. Ezogola nke a na ndekọ WordPress Plugins gị.
Hichapụ edemede mgbe ịmechara maka ihe nchekwa.
Chekwaa edemede dị n'okpuru dị ka faịlụ akpọrọ emergency.php na mgbọrọgwụ nke nwụnye WordPress gị (otu ndekọ ahụ nwere wp-config.php).
Na ihe nchọgharị gị, mepee http://example.com/emergency.php.
Dị ka a gwara gị, tinye aha njirimara onye nchịkwa (na-abụkarị nchịkwa) na paswọọdụ ọhụrụ, wee pịa Nhọrọ Mmelite. A na-egosipụta ozi na-egosipụta paswọọdụ gbanwere. Email na-ezigara ndị nchịkwa blog na ozi paswọọdụ gbanwere.
Hichapụ emergency.php gị na ihe nkesa mgbe ị na-eme. Ahapụkwala na sava gị ka onye ọzọ nwere ike iji ya gbanwee okwuntughe gị.
Nke a bụ koodu dị n'ime faịlụ ederede. Kpọgharia aha Mberede ka emergency.php ma tinye ya na mgbọrọgwụ nke nwụnye WordPress. Dị ka a dọrọ aka ná ntị: Wepu faịlụ mgbe iji!
Tags: furu efu wordpress okwuntughetọgharịa paswọọdụ hatọgharịa okwuntughe okwuntugheWordPress mberede
Google maka azụmahịa
Enweghị m mmasị na ya!
Ezi oku na ihichapụ faịlụ mgbe ojiji. Enwere m ike ịhụ bots na-enyocha maka emergency.php
Jul 10, 2012 na 11:11 PM
Ọ bụ ezie na m nwere atụmatụ ọzọ maka ịgbake, nke a rụpụtara ihe dị mma! Daalụ maka ịchekwa m oge ọzọ!